Bogga ugu weyn / blog / Waxa La Sameeyo Markaad Iibsaneyso Qasabada Jikada
2020 / 11 / 02 Qoondayntablog 2135 0
Ma u baahan tahay inaad soo hesho qasabadda jikada ee ugu tayada wanaagsan? Hagaag, hadaad raadineyso inaad hesho ikhtiyaar la isku halleyn karo, markaa waa inaad bilowdaa cilmibaaristaada oo aad dhex martaa faahfaahinta kuu oggolaan doonta inaad hesho natiijada la rabo. Hubso inaad dooraneyso qasabada ugu tayada wanaagsan jikada si aadan marka dambe wax dhibaato ah ula kulmin. Waa dariiqa saxda ah ee loo socdo si aad uga badbaado dhammaan dhibaatooyinka ku soo food saara. Adoo diirada saaraya waxyaabaha ugu muhiimsan, waxaad awoodi doontaa inaad hesho natiijada la rabo.
Had iyo jeer waa lagama maarmaan inaad doorato wax soo saarka ugu tayada fiican si aadan ugu baahnayn inaad wax dhibaato ah la kulanto goor dambe. Waxaan ka wada hadli doonnaa dhammaan waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay inaad xoogga saarto si aad arrimaha ugu maamusho sida saxda ah. Aynu eegno sida aad wax ugu fududeyn karto uguna fiicnaan karto naftaada.
Raadi Badeeco Lagu Kalsoon Yahay
Ugu horreyntii, waxaad u baahan doontaa inaad raadiso wax soo saar la isku halleyn karo. Haddii aadan raadineynin wax soo saar la isku halleyn karo, markaa ma awoodi doontid inaad hesho natiijada la rabo. Hubso inaad waxyaabo si faahfaahsan u hubineyso si aad wax ugu maamusho sida saxda ah. Adoo diirada saaraya faahfaahin kasta oo aad u muhiim ah, waxaad awoodi doontaa inaad hesho natiijada la rabo. Waa dariiqa saxda ah ee loo wado si aad wax ugu maamuli kartid habka ugu fiican. Hubso inaad raadineyso kalsooni markaad dooranaysid musqusha qasabadaha musqusha jikadaada.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad xoogga saarto ayaa ah inaad raadiso awood. Haddii aadan hubineynin inaad awood u leedahay, markaa waxaad la kulmi doontaa dhibaatooyin badan. Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad diiradda saarto si aad uga badbaado dhammaan dhibaatooyinka ku soo food saara. Hubso inaad hubineyso in la awoodi karo si aad ula timaado xalka weyn oo aad u iibsato qasabadaha musqusha ee iibka ah.
Hubi Qiimeynta Wax soo saarka
Waxa soo socda ee ay tahay inaad diiradda saarto ayaa ah inaad hubiso qiimeynta alaabta. Haddii aadan hubin sida loo helo tuubbooyinka biyaha hoostooda lagu rido, markaa waa inaad had iyo jeer hubisaa qiimeynta sheyga si aad wax ugu fududeeysid oo aad naftaada ugu fiicnaato. Kuwani waa waxyaabaha ay tahay inaad diirada saarto markaad iibsaneyso qasabada jikada.
Hore:: Warbixinta Isbeddellada Musqusha ee Mareykanka ee 2020: Musqulaha Smart, Musqulaha Dareemayaasha, iyo Kabadhada Musqusha ee Caadiga ah ayaa caan ku noqon doona! Next: 5 Waxyaabood oo Sameeya Qasabad Weyn oo Jikada wax loogu kariyo